हास्य | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
मोटो को हुनुहुन्छ
मार्च १, २०१ 1 देखि म्याक मोट रप कलाकार, संगीत प्रोजेक्ट सोल किचेनका पूर्व सदस्य को हुन्, ब्ल्याक स्टार इंकको एक कलाकार। मोट - म्याटवे मेल्नीकोभ, मोट र्याप कलाकारको नाम अन्तर्गत राम्ररी परिचित छ ...
तपाइँको जन्मदिनको लागि तपाइँलाई के दिने - बाँकीका लागि सम्झिन?
तपाइँको जन्मदिनको लागि तपाइँलाई के दिने - बाँकीका लागि सम्झिन? तपाईको जन्मदिन मा बच्चा पाउनुहोस् यो गाह्रो प्रश्न हो। हामी, केटीहरू, हरेक दिन डा ... हामी आफैंलाई सधैं लाड गर्छौं ... ...
कवि नाम अलिना। अलिना - मलिन, क्लब, आदि यो धेरै सजिलो छ
एलिना नामको कविता। एलिना - रास्पबेरी, कुडजेल, इत्यादि। यो पेट्रोलियम जेली बिना नै सजिलो एलिना पोर्क हो! अलिना नामको माटो कुनामा कुद्छ, हामी बीमलाई हिटमा विभाजन गर्दछौं।
जन्मदिनको शुभकामनाका लागि लिङ्क, कवि वा anime तस्वीर पठाउनुहोस्?
तपाईंको जन्मदिनको बधाईको लागि लिंक, कविता वा एनिमेस चित्र पठाउने हो? जन्मदिनको शुभकामना! म तपाईलाई सबै अंग र स्वास्थ्यको लागि हरेक जेबमा स्वास्थ्यको कामना गर्दछु! .. मलाई माफ गर्नुहोस् म आउन सक्दिन र ...
डिम्याग्युरीरी भनेको हो
डिमागोगुअरी के हो डिमा गोगिया एक जर्जियाली वक्ता र बेवकूफ हुन्। के होइन र को…। यो एक डेमागोग हो र I Demagoguary वक्तृत्व र पोलिकिकल प्राइमहरूको एक सेट हो र दर्शकहरूलाई यसको परिचय गराउने माध्यम हो ...
च्याम्बर №6 ZAHAAAR
चेम्बर न। Z जाखार चालकहरूबाट .. राम्रो पुरानो ZIS-,, पुरानो पुस्तालाई सम्झना दिलाउने जाखर, दुबै टेलर र एक योद्धा चालकहरूले ट्रकलाई थोर-पातलो र जाखर Ivanych (ZIS बाट) छोटो जकरको लागि बोलाउँथे।
अनि उहाँ कहाँबाट आउनुभयो? अनि कतिजना प्रति वर्ष कति?
र अँध्यारो दिन कहाँबाट आयो? र त्यहाँ कतिवटा प्रति वर्ष छन्? जनवरी २१ मा, एक सबैभन्दा असामान्य छुट्टिहरू संसारभरि मनाइन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय हग दिन। उही हो र…
मैले कसरी पासपोर्ट डाटा फेला पार्न सक्छु
कसरी तपाईं राहदानी डाटा पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ सामान्यतया, यो अर्को व्यक्तिको राहदानी डाटा प्रयोग गर्न पूर्णरूपमा वैध छैन। अर्को प्रश्न यो छ कि कहिलेकाँही तपाईं आफ्ना प्रियजनहरूलाई चकित पार्न चाहनुहुन्छ (सेतो याटको लागि दान, पेरिसको एउटा अपार्टमेन्ट) ...
किन “दिने” र “दिने” छैन?
किन "दिनुहुन्छ" र "दिनुहुन्न"? मेरो एक साथी छ जसले मलाई दिनुहोस् (((("डारिया" को रूपमा, "डारिया" होइन)))) ड्यास-नाम, दिनुहोस्-क्रियावश किनभने ...
फन्च को हो ?:
फिन्चहरू को हुन्?: फिन्च भनेको चराहरू हो, भँगेराको आकार, शरीरको लम्बाई १ 14,5..24,5 सेन्टीमिटर हुन्छ। पखेटा २ 28,5..15-२40. is हुन्छ। फिंचको तौल १--XNUMX० ग्राम छ। नरको पमगेजको रंग उज्यालो छ ...
मलाई पढ्न निकै कठिन पाठ खोज्नुहोस्। यसलाई पाठ लेख्न तुरुन्तै सल्लाह छ। धन्यवाद!
ब्रोकोली के लागि राम्रो हो?
किन ब्रोकली तपाईंको लागि राम्रो छ? Kopec! किन बहुवचन? यो केवल भिटामिन बम हो, जसलाई कुनै तरकारीसँग तुलना गर्न सकिदैन, यहाँ लिंकहरू परियोजना प्रशासनको निर्णयले विस्तृत रूपमा अवरुद्ध गरिएको छ ...
हामीलाई 50 वर्षको सालगिरहको साथमा एक धेरै मजेदार बधाई छ। हामीलाई 50 वर्षको सालगिरहको साथमा एक धेरै मजेदार बधाई छ।
हामीलाई उसको 50० औं जन्मदिनको अवसरमा एक धेरै हास्यास्पद बधाई चाहिन्छ। हामीलाई उसको 50० औं जन्मदिनको अवसरमा एक धेरै हास्यास्पद बधाई चाहिन्छ। एक पटक यसको सानो चल्लाहरूसँग एउटा निगल शिकारीहरूबाट भाग्यो र अन्तमा ...
मान्छे! मद्दत चाहिन्छ !!! कविताको लागि कविता TANYUSHKA कडा र ठुलो मासु! मलाई चिन्ता छ?
मानिसहरु !!! सहयोग चाहियो!!! TANYUSHKA नामको कविता सुन्दर र एक मगको लागि दयालु !! मलाई pliz बताऊ? सानी केटी परिचारिका हाँस्दै तान्या तपाईं कुकी जस्तै हुनुहुन्छ !!! कुकी कोनोपुष्का, बन, खेलौना, पोर्न, प्रेमिका, गाउँ, कालो, ...
तपाइँ कसरी "Hesh बोला बोला" अनुवाद गर्नुहुन्छ?
तपाइँ कसरी "Hesh बोला बोला" अनुवाद गर्नुहुन्छ? अल्लाह संग सम्बन्धित केहि। बालाबोललाई यो सोध्नु आवश्यक छ। यदि HESH तपाईंले धूम्रपान गर्नुहुन्छ भने, Bola-Bola, BLAH, MOW! यो मैदानमा बढ्छ, यो उत्कटताका साथ प्रवेश गर्दछ ...; ...
प्रशंसा के हो?
प्रशंसा के हो? उपसर्ग "डि" को अर्थ "हो" हो, त्यसैले स्तुतिहरू डबल फिराम्बहरू हुन्))) दिथिरा # 769 948;; एमबी (ग्रीक # 953 952;; # 973 961;; # 945 956२; # 946 959;; # 962; #; # XNUMX XNUMX; # XNUMX XNUMX; # XNUMX XNUMX;; ; # XNUMX XNUMX;; # XNUMX XNUMX;;) पुरातन ग्रीक कोरल गीतहरूको विधा। Dithyrambs धेरै भाग को लागि कोरस द्वारा गाई, एक आँधीबेहरी चरित्र चरित्र भजनहरू हुन् ...
पिसोसको बारेमा मजाक बुझाउनुहोस् यो एक मजाक होइन, गम्भीरता म यो जान्न चाहन्छु कि यो मजाकबाट आएको छ
पिसोसको बारेमा जोक वर्णन गर्नुहोस् यो मजाक होइन, म गम्भीरतापूर्वक जान्न चाहन्छु कि यो मजाक कहाँबाट आएको हो https://www.youtube.com/user/Dimka765 तपाईं पियसस SOSI बाट उनको pisos को बारे मा भर्चु स्तरमा खेलाडीहरू हुनुहुन्छ।
सानो केटाको बारेमा मजाकिया कविता के हो?
सबैभन्दा रमाईलो साना केटाको कविता के हो? गेस्टापोमा खेल्ने एक सानो केटो। उनले तहखानेमा लास्क्स्मिथ वास्यालाई यातना दिए। अण्डाहरू उसको टाउकोको पछाडि नailed्ग पारिएका थिए ... होइन! उनले बोतल कहाँ लुकाए भनेर भनेन। सानो छोरा लाई ...
शब्द लचको अर्थ बुझ्न?
Goof शव्दको अर्थ बुझाउनुहोस्? यो एक व्यक्ति हो जो चकित छैन। प्रेमी खाली फ्रिज को sucker Dexterous, बहादुर, बहादुर सोध्नु पर्छ। जो रेफ्रिजरेटर खोल्न मन पराउँछन् http://vk.com/photo-11203246_385160597 कहिले भाग्यशाली हुँदैन, अख्तियार बिनाको व्यक्तित्व eeeee ...।
अग्रगामी मन्त्र। कसले एक साथ प ?्क्तिमा हिड्छ? हाम्रो अग्रगामी टीम! कडा, बहादुर। निपुण, कुशल तपाईं हिड्नुहोस्, पछाडि नहुनुहोस्, ठूलो स्वरमा गीत गाऊ। *** को आउँदैछ? हामी जाँदैछौं! को गाउँछन्? हामी गाउँछौं! को हिड्छ ...
पृष्ठ 1 पृष्ठ2... पृष्ठ6अर्को पाना
89 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,567 प्रश्नहरू।